Ny iPhone 8 dia mety manampy ny fanamarinana IP68 | Vaovao IPhone
Ity dia efa nanontany ny mpampiasa iPhone momba ny mety hanampiana izahay Ny fanoherana ny rano dia efa zava-misy ankehitriny, ary ilay iPhone 7 vaovao sy iPhone 7 Plus vaovao izay manampy ny fanamarinana IP67 izay mamela ny fitaovan'ny Apple mahazaka rano, saingy tsy midika izany fa tsara ny mandro miaraka amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny fanamarinana azontsika atao mba hampidoboka ny iPhone hatramin'ny 1 metatra lalina ary hatramin'ny 30 minitra, na inona na inona mihoatra an'io fotoana na halaliny io dia mety hanimba ny fitaovana.
Mampitandrina an'izany ny famoahana iray ity fanamarinana ity dia mety hahatratra IP68, izay mety ho faran'izay betsaka indrindra amin'ny ambaratonga IP izay manomboka amin'ny 0 ka hatramin'ny 8 ary avy eo dia mitohy amin'ny fiarovana IP9K, izay tena voafaritra kokoa ary manome fiarovana amin'ireo fiaramanidina maripana avo lenta.
Ny fialana fanamarinana hafa ho an'ny fitaovana "karazana tank" dia manazava i Apple, na eo aza ny fanamarinana IP67 nampiana ilay iPhone 7 sy 7 Plus vaovao, fa ny fitohizan'ny fampiasana ilay fitaovana ao anaty rano dia mety hiafara amin'ny fanimbana azy noho izany ny fiantohana dia tsy manarona ireo fahasimbana mety hitranga aminao amin'ny alàlan'ny rano na rano.
Tsy isalasalana fa ny fanoherana ny rano angamba iray amin'ireo zava-baovao farany miavaka amin'ireo iPhone ireoHatramin'izay tsy mbola nisy iPhone nahavita an'io fanamarinana io. Ary koa izao ny mpanelanelana Ny Korea Herald miresaka momba ny fitomboan'ny isa amin'ny fanamarinana ireto maodely iPhone manaraka ireto, noho izany dia mijanona miaraka amin'ny fanamarinana IP68 izy ireo.
Ity fanamarinana IP68 ity dia tsy hoe tsara lavitra noho ilay ananany ankehitriny, fa manampy amin'ny fitaovana hafa fanoherana bebe kokoa mahatratra ny Nilentika nandritra ny 1.5 minitra ny halalin'ny 30 metatra. Na izany na tsy izany, tsaho izany ary ny fanamarinana ankehitriny dia tena tsara ho an'ny ankamaroan'ny fampiasana ary aza matahotra ny ho lena sy hanapotika ny iPhone.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Mety ho ny iPhone 8 dia nanisy fanamarinana IP68
Kalitao tena tsara iray hafa amin'ny iPhone 8 nandrasana hatry ny ela na anarana mitovy amin'izany. Azo antoka fa io no ho fankalazana ny faha-XNUMX taonako manaraka. Manantena aho fa manamboatra fitaovana ho an'ny rehetra i Apple.